Ọnụ ụzọ nrịgo elu dị elu / akwa nkwụsị nke Rapid Roller China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ Ụzọ Ntugharị Mgbasa Ụlọ Ọrụ,Agba ụcha agba agba,Mgbawa akpaaka
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọnụ ụzọ nkwụsị elu > Ọnụ ụzọ nrịgo elu dị elu / akwa nkwụsị nke Rapid Roller
Ihe Nlereanya.: HF-S416
Ubu oke: 500 Set/Sets per Month
Ụgbọ njem: Ocean,Land,Air,DHL
Ọnụ ụzọ ntanetị nke Rapid nwere ọrụ dịgasị iche iche dị ka ichebe okpomọkụ, nchedo oyi, ihe àmà nke ahụhụ, windproof, ájá na soundproof. A na-etinye ya n'ọtụtụ ebe na-adọba ụgbọala, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nri, textile, ngwá electronic, mbipụta na nkwakọ ngwaahịa, mgbakọ ụgbọala, ígwè ọrụ ziri ezi, lojistike na nchekwa.
O nwere ike izute nhazi akụrụngwa dị elu na ebe obibi nhicha, chebe ike ma melite oyi. Nwepu na mmechi oghere dị elu, melite arụmọrụ ọrụ na àgwà gburugburu ebe obibi. Ọnụ ụzọ na-ebu ọnụ na-adaba maka ọnụ ụzọ buru ibu ma nwee ike ijide ifufe na-agba ọsọ n'elu ogo 10.
1. Oghere windproof
A na-ese ya na galvanized ígwè na mara mma, inogide ma na-eyi na-eguzogide ọgwụ. N'iji teknụzụ welding elu, ihe a na-adịgide adịgide, ọ naghị adịrị mfe iji gbajie agbaji .
4. Ihuenyo anya
Ọnụ Ụzọ Ntugharị Mgbasa Ụlọ Ọrụ Agba ụcha agba agba Mgbawa akpaaka Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na-agbapu Ọnụ Ọnụ Ụzọ Ntugharị Na-ebu Ọnụ Ọnụ Ụzọ Ntugharị ma ọ bụ Ọkụ abụọ Ọnụ Ụzọ Ntugharị Ọnụ Ụzọ Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Maka Ụlọ Ọrụ